गुगलमा सलमान खानभन्दा बढि सर्च भएका हिरोहरु… – YesKathmandu.com
गुगलमा सलमान खानभन्दा बढि सर्च भएका हिरोहरु…
बुधबार ०६, पुष २०७३
हालै दक्षिण एसियालि देश भारत, बंगलादेश र नेपालका करोडौ जनताले सामाजिक संजानलमा भईरल बनाएको फोटोको वस्तविकता थाहा पाए पछि तपाई होस उडन सक्छ ।
उनको रंग गोरो छैन, उनी हलिउड, बलिउड्का हिरोझै हल्यण्डसम पनि छैन् । उनी छन काला दुब्ला पातला यसै कारणले समाजिक संजालमा उनको बिल्ला (गिज्यउनु) गर्ने लाईसेन्स हामीले पाएका हौँ ।
उनी जतिनै काला भएपनि उनले ह्याण्डसम व्याक्तिको कम्मरै भाच्ने काम गरेका छन् । उनी यस्ता हिरो हुन जसले हिम्मत कहिले हारेनन् । उनी कुनै साधारण व्याक्ति होइनन, उनी हुन बंग्लादेशि हिरो अशराफुल अलोम बगोरा ।
उनको जन्म बंगलादेशको बोगरा जिल्लाको एक गाउँमा भएको हो । उनका बुबा ‘चनाचुर’ (एक प्रकारको निमकिन) बेच्नेकाम गर्दथ्ये । जव १० वर्षका थिए उनका बुबाले उनको आमालाई छोडेर दोस्रो बिबाह गरेका थिए । उनले आँमा सँगै चनाचुर बेच्ने काम गरे जसको कारणले गर्दा उनको पढाई बिग्रियो र उनी सात कक्षामा फेल भए र पढाई छोडिदिए ।
उनको घर नजिकै एक भिडियो पसल थियो । उनी दिनभर आँमा सँग चनाचुर बेचेर बेलुका भिडियो पसलमा काम गथ्र्ये । उक्त पसलमा उनले भिडियो बेच्ने काम गरे । एक दिन साहुले सो पसल बेच्ने निर्णय गरे गर उनले उक्त पसल बेच्न दिएन । साहुलाई भने यो पसल नबेच्नु होस म चलाउ छु तर तपाईलाई पैसा म किस्ता का दिन्छु ।
उक्त समय उनी १५ वर्षमा थिए । साहुले धेरै सोचेर उनलाई पसल दिने निधो गरे । उनले १५ बर्षको उमेरमा दुई वटा व्यवसाय गर्ने निर्णय गरे ।
जब गाउँमा केबल टिभि आयो उनले केबल टिभि चलाउने निर्णय गरे । उक्त कामको लागि अब्दुल रजाले उनलाई सहयोग गरे । त्यसपछि उनले ‘सोकल–सोध केबल नेटर्वक’ नामको केबल टिभि चलाउन थाले । त्यसपछि उनलाई हिरो बन्न मन लाग्यो । उनले आफ्ना रंग र रुप नहेरि उनले हिरो बन्ने अठोट गरे । उनी रात दिन म्युजिक भिडियोहरु हेर्न थाले ।
सन् २००८ मा उनले एउटा गितको भिडियो खेल जसमा नाइकाको भुमिक उनकै गाउको एक केटिले गरेकि थिइन । उक्त भिडियो उनले आफ्नो केबल टिभिबाट प्रसारण गरिदिए । जसबाट उनले प्रशंसा र गालि दुबै पाय । उक्त भिडियो स्क्रिप्ट देखि शुटिङग सबै लगानि आफै गरे । त्यस पछि उनले पछाडि र्फकेर हेरेन र हाल सम्म उनले पाँच सय म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरिकेका छन् ।
जस्तै जस्तै युट्युबमा हिट हुदै गए त्यस्तै त्यस्तै उनलाई अफर पनि मिल्दै गए । उनले हालसम्म थुप्रै फिल्म, नाटकको क्षेत्रमा पनि अभिनय गरिसकेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन उनलाई भेटन क्रिकेटर समेत आउछन् । एक समय हिरो अशराफुल अलोम मीरपुर रंगशालामा क्रिकेट हेर्न गएका थिए । क्रिकेटर मुशफिकुर रहिम लाई आलोम आएका छन भन्ने थाहा भए पछि उनले भेटेर फोटो समेत खिचेका थिए ।
आलोम एक रिएल हिरो हुन उनले जुन अवस्थाबाट चचित नायक बने । उनले एक अन्तरवार्तमा भनेका थिए म कुनै नशा गर्दैन मलाई नशा छ त मात्र अभिनय को ।
सुरु–सुरुमा उनी सँग कसैले पनि काम गर्न नचाहेने र जसै–जसै उनी हिट हुदै गए उनी सँग फोटो खिच्नेको भिड्लाग्ने गरेको उनी बताउछन् ।
कुनै समय उनको बिल्ला गर्नेहरु आज उनको भिडियो हेरेर उनी सँग भेटन तड्पिरहेको उनले बताएका छन् । उनको यो वास्तविकता थाहा पाएपछि आफ्नो सुन्दरता माथि घमण्ड गर्नेहरुको घमण्ड तोडिएको छ ।
सन् २००९ मा उनको बिहे भएको हो, हाल उनका दुई बच्चा छन् ।
माओवादी कुनै पार्टी होइन,आन्दोलन हो
रंगकर्मी सुनिल पोखरेलको ‘मार्मिक आक्रोश’
फिल्म हलमा केपी ओलीको जम्काभेट जब कोमल ओलीसँग भयो …
म्यूजिक भिडियो सुटिङका क्रममा मोडल सविनाको निधन
कसले जित्यो हलिउडमा सबैभन्दा ठूलो मानिने ओस्कार अवार्ड ?
टुडिखेलमा बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी र मलाइकाको आइटम डान्स
करिष्मा मानन्धरको आक्रोश ‘बच्चा नै नपाई लुलो लंगडो भन्न पाइन्छ ? ’
प्रहरी ज्यादतीको यो हद: नियम मिच्ने कोमल वली,हिरासतमा कोचिने डा. जोशी
लोक संचारकर्मी नेपालले गर्यो एकैपटक २७ वटा तीज गीतको विमोचन
कर फछर्याैट ऐन खारेज गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन
बाबुराम भट्टराईको अनोठौ उद्घोष: ‘प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ला, नयाँ झन्झटमा फसिएला भनेर माओवादी पार्टी छाडेको हुँ ’
सिलवालले पाँच जना न्यायाधीशको बाजा बजाउने !
भृकुटीमण्डपमा जे देखियोःकोमल ओली आक्रामक,रेखा थापा कमजोर
एनजिओ र आइएनजिओको कार्यक्रममा सहभागि हुन सिडिओलाई गृहको प्रतिबन्द
खोलाले बगाएर विद्यार्थी बेपत्ता